Ukuzilibazisa kunye Nemisebenzi Ndiyaqalisa
Ukunqoba amaQhinga aMnyama kunye neeMpawu eziMnyama
I-OK OK / I-Choice yomfaki weRF / Getty Izithombe
Abaqalayo beGitare bahlala bekhalaza ukuba izixhobo zabo zokudlala igita zivelisa izandi ezifile kunye nezingenangqungquthela. Kukho umbandela obandakanya ukubekwa komunwe kunye, ngokomzekelo, iinqununu ezinkulu kunye no-C apho umqondiso wesandla uhlala ubonakala uthayathe umtya ongezantsi. Umnxeba wokulahla unqanda umtya ukuba ungakuniki umgca ocacileyo.
Lo ngumngeni oqhelekileyo oqalayo, kwaye ngokuqhelekileyo kuba ngumphumo wokuma kwesandla esingenasiphelo. Ukuzama ukulungisa le ngxaki, qwalela ingqalelo kwisithupha sakho kwisandla sakho esichukumisayo (isandla esibamba amanqaku kwi- fretboard ). Makhe sikhangele oku ku bunzulu.
Ukulungisa i-Guitar Finger Positioning
Nasi umzekelo wendlela engafanelekanga yokubeka izandla zakho ukuze udlale izixhobo zokudlala isiginci. Qaphela isithupha kwisandla esichukumisayo siphumula phezulu kwi-fretboard. Oku kutshintsha yonke indawo yesandla esichukumisayo. Xa oku kwenzeka:
Isundu sihleli phantsi kwe-fretboard, eyanciphisa ukuhamba nokukwazi ukunweba.
Iminwe igqityiweyo xa idlala amanqaku kwisiqhwa sesithandathu nesihlanu. Ngenxa yoko, iminwe iyakwazi ukudibana ngokukhawuleza kunye nemicu engafanelekanga, kubangele amanqaku angenanto okanye oko kuthiwa "imicu efile."
Nceda uqaphele ukuba ngezinye ixesha elizayo, ungasebenzisa isithupha sakho ukuba ugqungqe entanyeni yecarari ukuze unyuke amanqaku kumtya wesithandathu. Ungabona kwakhona ukuba ezinye iigitarist ezizithandayo zithatha intamo ngendlela efana neendlela eziboniswe apha. Isikhundla sesandla esinokusebenza kakuhle kwimeko efanelekileyo, kodwa kuya kwenza nzima ukuba iitars zibe nzima. Ngoku, thintela.
I-Guitar Chord Fing Positioning efanele
Umfanekiso ohamba kunye nesi sidididi ibonisa indlela efanelekileyo yokubamba entanyeni yecirari. Isiqwenga sifanele siphumelele ngenyameko kwinqanaba lomsila wengcongolo. Isikhundla sakho sandla kufuneka senziwe ngolu hlobo ukuze iminwe isondele kumacangca malunga nekona elifanelekileyo, usebenzisa iingcebiso zeminwe ukudibana nomtya ngamnye. Oku kuya kunceda ukuphepha ukuphazamisa ngengozi imicu emibini ngomnwe omnye, kwaye kuya kuhamba ixesha elide ekupheliseni amanqaku angenanto.
Ukugqibela ukujonga ukulungisa iingxaki
Ukuba usenemiba eneenkcukacha ezingenayo, ke yodwa ingxaki yakho, kwaye uzame ukuza nesisombululo.
Umzekelo, ukuba uqaphela ukuba u- G oyi-key chord akayikukhala ngokucacileyo, uze udlale intambo nganye kwisiqholo, enye ngenye, ukhangele ukuba yeyiphi imicu engeyiyo. Emva koko, qaphela ukuba kutheni umtya ungacingi. Ngaba awuyixinzelele imida ngokukhawuleza? Ngaba enye yeminwe yakho ephoqayo ayinakulinganiswa ngokwaneleyo, kwaye ichaphazela imicu emibini? Ngaba umunwe ongasetshenziswanga unomthi uthinte i-fretboard ngokukhawuleza? Xa ukhululile ingxaki okanye iingxaki, zama ukuzilungisa, ngomnye. Amathuba afana neengxaki ezifanayo nzekayo xa udlala umdlalo. Uhlula kunye no koyisa.
Iindlela Zokunxibelelana Kwezandla Zokunene
IC Major Scale kwiBass
Indlela yokuhlaziya i-Guitar yakho ukuvula D
Indlela yokuFunda iQaphela amagama kwiBass
Indlela yokuhlaziya ukulele
Indlela yokuhlaziya i-Guitar
Ukutshintsha iiChords ngokukhawuleza
Ukubhala Iingoma ezingcono
I-English Reference Reference
Ulwazi loPhambili luphucula ukuFunda ukuqonda
Ukwahlula iLizwi Xa Ubhala okanye Ubhala
12 Classic Essays nguTwain, Woolf, Orwell, kunye noMninzi
I-Delta State University Admissions
Yintoni eyahlukileyo phakathi kokuxhoma kunye nokunciphisa?
Iprojekthi ze-Crystal Science Fair
I-Florida Gulf Coast University i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Isibheno kubantu (Ubuxoki)
Imbali emfutshane yeCEDAW